अवध किशोर प्रसाद (अधिवक्ता)
जब सबै मधेशी भारतीय छ भने नेपालमा को छ नेपाली ? पहाडको कुमायूँ बाहुन, वा आन्ध्र प्रदेश कर्नाटकबाट
आएको नेवाड ? वा राजस्थानबाट आएको पूर्व राजपरिवार वा सहरसा विहारबाट आएको कोईराला परिवार ? वा अन्य को छ नेपाली ?
सधै मधेशी लाई भारतीय भनेर किन गाली गरि रहने ? यही हो विखन्डण वादी सोंच खासगरी ए.मा.ले. को सोंच हो यो र महाप्रभु के.पी. शर्मा को । १६ फाल्गुन २०७३ को अन्नपूर्ण पोष्टमा एउटा लेख पढ्न पाऐं, लेखकले दिल खोलेर मधेशीहरुलाई गाली गर्नु भएको छ, अभद्र शब्द प्रयोग गरेर, सभ्यताको सिमा नाघेर प्रायः अधिकांश ९९ प्रतिशत पहाडी लेखक को मूल लक्ष्य मधेश विरोध नै हुन्छ मधेशलाई बदनाम गर्ने र भारतीय संज्ञा दिने “साँढे वैद्य” मधेशीलाई लेख्नु भएको छ । पहाडिया को यो नसलि लेख तराईमा पठाउनु नै नपर्ने, पठाईन्छ भने मधेशी को लेख पनि छापनु पर्ने, तर बेईमान काठमाँडूको मिडिया यस्तो गर्दैन किन ? अब यस्तो भयो भने उक्त पेपरको
विरोध किन नगर्ने ? पहाडी पेपर नस्लीय भेद्भावले पूर्ण छ । समावेशी समानुपातीक हिसावले पनि जति पहाडी लेखकको लेख छापीन्छ, त्यतिकै संख्यामा मधेशीको लेख पनि छापनु पर्ने ?
पहाडी राजनैतिक पार्टीको नेता त “भगवा” (अण्डरवीयर) खोलेर मधेशीलाई गाली गर्छ, भने मिडिया पनि पैंट फुकालेर मधेशी विरुद्ध छाप छ । हालै
राजविराजको घटनालाई ए.मा.ले.को पक्षमा ब्लक बनाएर समाचार सम्प्रेषन गरेको छ तर मधेशी मोर्चाको मन्तव्य ब्लक बनाएर छापेको छैन किन ? घटना घटाइएको छ, घटेको छैन । भिडियो क्लिप टी.भी. मा हेर्दा सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ । मिटिंग भईरहेको २०० मीटर टाढा गोली चलाउनेको के अर्थ त्यो पनि टाउकोमा, घरमा घुसेर लखेटेर कुट्दै को सीन टी भीमा छ , कति एमाले घाइते भएको छ ? कति प्रहरी सिकिस्त छ ? प्रहरी पनि नसली भेदभाव गर्छ यो नेपाल मै हुन्छ ।
मिडियामा लेख छ, पुलिसको गोली लागेर ५ जना को मृत्यु ? गोली लागेर कि. गोेली हानेर, मृत्यु होईन हत्या भएको हो कांग्रेस, एमाले र माओवादीको संयुक्त षड्यन्त्र हो यो । राजविराजको कानून व्यवसायी साथीहरु हत्याको मुद्दा चलाउँदै हुनु हुन्छ ठीकै गरी रहेका छन् । कुनै पनि मधेशीको दिलमा यो अनुभूति भईरहेको छैन किन काठमांडौंमा जो पनि पहाडी सरकार आउँछ उ मधेशीको हित को पनी चाहना राख्छ । सीर्फ पहाडी–
पहाडी मात्र पहाडी हितको चाहना । नेपाली नागरिक को हित होईन पहाडी सँस्कृति को हितको चाहना । अगर पहाडी राष्ट्रवाद छ, त मधेशी राष्ट्रवाद पनि छ मात्र पहाडी राष्ट्रवादको एकतर्फी सोंच के देश समृद्धि तिर जाला ? मधेशी वितृष्णा को रिजल्ट के हुन सक्छ थाह छ ? एमाले पार्टी माथी तुरन्त प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ ।एमाले पार्टी को दर्ता नै
खारेज गर्नु पर्छ । देशको विखन्डन गर्न खोज्ने घातक र झूठा राष्ट्रवादको
नारा दिनेलाई प्रतिबन्ध आवश्यक मात्र होईन अपरिहार्य छ । इतिहासमा यस्तो अनेकौ उदाहरण छ के नस्लीय नर संहार स्वतंन्त्र देशको आधार शीला बन्न पुगेको छ । नेपाल पनि यस्तै उदाहरण बन्ने छ कि ? मेची महाकाली यात्रा अहंकारको प्रतिक छ अहंकार र अहंकारीको नाश मात्र अवश्य नै हुने गर्छ । शुरुमा माथि उल्लेखित लेखमा यस्तो लाग्छ महान विचारक राष्ट्रवादीको लेख पढि रहेको छु । तर अन्तमा बात वही मधेशीको विरोध । यस विचित्र जन्तु (गौतम थर) को लेखमा उल्लेखित छ, गणतंत्र, संघीयता, विदेशी दिमाग को उपज हो । गणतंत्र, संघीयता रहेसम्म राष्ट्र सुरक्षित रहँदैन । मधेशी नेताहरु भारतबाट आएको र नेपाल लुटेर करोडों आर्जन गरेर भारत लागेको उल्लेखित छ । नेपाली भाषा सरह हिन्दी लाई सरकारी कामकाजको मान्यता दियो भने हिमाल खसेर तराईमा आउँछ, समुद्र उफान दिएर नेपाललाई डूबाई दिन्छ, हिन्दी सँग अति द्वेष किन ? वहाँलाई थाह नै छैन, नेपाली कुनै भाषा नै छैन, जसलाई पहाडीहरु नेपाली भाषा भन्छन्, उँ “पहाडी हिन्दी” हो र तराईमा बोल्ने “मधेशी हिन्दी” हो, सबै हिन्दी नै हो, लिपी पनि एउटै देवनागरी नै हो मेरो विचारमा त नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा, दुबै हुनु पर्छ, पहाडी हिन्दी र मेधशी हिन्दी, भेद्भाव किन ? भोली यो गर्ने बाध्यता नै हुन्छ । समयको प्रवाहलाई कसले रोक्न सक्छ र ? उक्त लेखमा छ संविधान संशोधन पछि लाखौं भारतीयलाई नेपालमा प्रवेश गराउने षड्यन्त्र हुन सक्छ । उक्त जीव काल्पनिक लोकमा विचरण गरि रहेको छ । के भारत नेपाल भन्दा गरिब देश हो ? भारत
जस्तो सुविधा नेपालमा छ र ? भारतीय किन नेपाल आउँछ ? नेपालको लाखों
पहाडी बहादुर भएर भारतमा गार्ड मजदूरको रुपमा छ वहाँलाई थाहा हुन पर्यो । ४० लाख नेपाली मलेशीया र खाडी मुलुकमा छ ।
आफ्नो देशको नागरिकलाई त
रोजगारीको अवसर मुहैमा गराउन सकेका छैन् र भारतीय आउँछ रे ? अगर एका–ढुका कुनै भारतीय संबन्धको आधारमा नेपाल प्रवेश गरेको छ भने त्यो पनि पहाडी कर्मचारीले नै घुस खाएर नकली नागरिकता दिएको नै हुनु पर्छ । मधेशी यस्तो गलत काम गर्ने आँट पनि गर्दैन । वहाँलाई थाहा हुनु पर्यो, कोईराला परिवार विहारको सहरसाबाट नेपाल आएको हो । पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल पनि विहारको वैरगनियाबाट आएको तथ्य छ । पूर्व विदेशी मंत्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय मुजफफरपुरबाट नेपाली भएको हो । शाहवंश राजस्थानबाट आएका हुन् । आजको लाखों पहाडी नेपाली बाहुन कुमाई गढवालको भारतीय नै हुन् । पूर्व प्रधान मंत्री समेत । उनीहरु यस भारतबाट आएकोमा देश विखन्डन भएन्, तर मधेशी आफ्नो हक खोजिरहेकोछ भने देश नै विखन्डन हुन्छ रे ? राष्ट्रघात हुन्छ ? कल्पनाको संसार कस्तो हुन्छ एउटा उदाहरण यहाँ दिई रहेको छु ।
एकजना बूढो व्यक्ति टे«नमा सफर गरि रहेको थियो उसको छेऊमा एउटा स्मार्ट केटा पनि बसि रहेको थियो । नौजवानले बूढो सँग सोध्यो तपाईको घडीमा कति टाईम भई रहेको छ ? बूढो चुप, केहि बोलेन, पछि बूढोले मुख खोल्यो, म तिमीलाई टाईम बताउँदिन, किन कि टाईम बताएपछि तिमी सँग कुरा कानि अगाडी बढ्छ, म कहाँ बस्छु, के काम गर्छु ? इत्यादि, ट्रेन बाट उत्रिएपछि तिमी म सँग भेट्न मेरो घर आउँछौं । मेरो घरमा मेरो सुन्दरी छोरी छिन, तिमी लभ गर्न थाल्छौं र पछि मेरो छोडीसँग विहे गरि दिऊ प्रस्ताव ल्याउँ छांै । म तिमी सँग छोरी दिन्न, त्यसैले म घडिको टाईम बताऊँ दिन ।
यस्तै काल्पनिक लोकमा शासक पहाडी वर्ग छ, मधेशीको कुन्ठित अधिकार दियो भने, देश नै विखन्डन हुन्छ, राष्ट्रघात हुन्छ, भारतमा मधेशलाई मिसाई दियो, मधेश स्वतंत्र देश नै बन्छ इत्यादि–इत्यादि । बूढोको टाईम घडि जस्तो । भगवान गरोस पहाडीहरुको कल्पना साकार होस् ।